के निशाले अरु चलचित्रमा मेहनत गरेकी थिईनन् ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
के निशाले अरु चलचित्रमा मेहनत गरेकी थिईनन् ?
काठमाडौं । नायिका नीशा अधिकारीले चलचित्र रोमियोका लागि खुबै मिहिनेत गरेकी दाबी गरेकी छिन् । यसको अर्थ के हो ? के निशाले अरु चलचित्रमा मेहनत गरेकी थिईनन् ? तर रोमियो लागि उनले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिईन् ? प्राय एक पछि अर्को चलचित्र फ्लप हुदै गएपछि निशा अधिकारी अब निर्माताको रुपमा आउन चाहेकी छिन् ।
उनी अभिनीत पछिल्लो चलचित्र रोमीयो पछि उनले झ्यानाकुटी निर्माण गर्ने भएकी छिन् । चलचित्र रोमीयोमा आकर्षक देखिनका लागि नीशाले भरपुर मिहिनेत गरेको दाबी गरेकी हुन् । एचआरके प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र रोमियोको बाबरी बोलको गीतको छायांकन पोखराको सिक्लेसमा गरेर यसको टोली काठमाण्डौ फर्किएको छ ।
निर्माता हसनराजा खानले ६ दिन लगाएर गीतको छायांकन गरेको बताए । चलचित्रमा नीशा अधिकारी, मेलिना मानन्धर, हसनराजा खान र ओसिमा बनु मुख्य भूमिकामा छन् । छायांकन गरिएको गीतमा हसन र नीशालाई फिचर गरिएको छ । सन्तोष लामा र मेलिना राईको आवाजमा समावेश यो गीतमा ताराप्रकाश लिम्बुको संगीत छ । रामेश्वर कार्कीले खिचेको गीतलाई शिशिर खातीले कोरियोग्राफी गरेका हुन् ।